XOG:Beesha Habargidir oo qarka u saaran iney ka baxdo Heshiiska Galmudug & Xiisada Dh/mareeb | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA XOG:Beesha Habargidir oo qarka u saaran iney ka baxdo Heshiiska Galmudug &...
XOG:Beesha Habargidir oo qarka u saaran iney ka baxdo Heshiiska Galmudug & Xiisada Dh/mareeb
Qaar ka mid ah Beelaha Habargidir ayaa si adag kaga soo horjeestay qorshaha Dowladda Federaalka ee ku aadan doorashada Galmudug iyo dhaq dhaqaaqa siyaasadeed ee haatan ka taagan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud.
Beelaha Sacad iyo Saleebaan ee Habargidir ayaa sheegay ineysan ku qanacsaneyn waxa ka socda Dhuusamareeb,islamarkaana ay kaliya ku kooban tahay wixii ka soo baxa Dowladda Federaalka iyo cidii taageersan.
Waxay Dowladda Farmaajo ku eedeeyeen iney faragelin toos ah ay ku heyso doorashada Galmudug,islamarkaana dooneyso iney soo saarato hoggaamiye hayin u ah Villa Soomaaliya,islamarkaana rabitaankeeda qudha fuliya.
Sidoo kale,waxayna walaac xooggan ka muujiyeen ciidanka Itoobiyan ee haatan ku soo qul qulaya magaalada Dhuusamareen,waxayna ka cabsi qabaan in arrinta isku bedesho sida doorashadii 2018-kii ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah ee maamulka Koonfur galbeed.
Siyaasiyiinta,Xildhibaanada iyo qaar ka mid ah Waxgaradka ka soo jeeda Galmudug ayaa ka digay natiijada ka dhalan karta in ciidan Itoobiyan ah loo adeegsado doorashada Galmudug ee bishan gudaheeda lagu wado iney ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb.
Previous articleSidee Jabuuti ku heshay Hoggaanka Baarlamaanka Afrika & Xog culus oo laga helay?
Next articleXOG: RW Kheyre oo wal wal ka muujinaya khal khal ku yimaada qorshihiisa doorashada 2020
DHAGEYSO:-Shimbiro aan nuucooda hore loo arag laguna Tilmaamay Mucjiso oo lagu arkay Muqdisho..
DEG DEG:Wafdi oo hogaaminaayo MD Farmaajo oo goor dhow ka duulay magaalada Muqdisho…
DHAGEYSO: Maxay Soomaaliya ka Faa’iidi Kartaa Cafinta Deynta Lagu Leeyahay?
Daawo: Somaliland oo war ka soo saartay wasiiradii hore ee tagay Xamar iyo qorshahooda dhabta ah
Dhageyso:-Maamulka Jubbaland Oo U Digay Siyaasiyiinta Degaanada Maamulkaas
Danjiraha Mareykanka ee Somalia Mr Yomomoto oo door ku lahaa Magacaabista Abiy Axmed
“Waxaan ka baqayaa in dadkii aan telefoonkeyga farriimaha uga diray oo dhan la dilo”
Shirar gooni gooni oo kasocda magaalada Baydhabo oo ka qeyb galayaan madaxda dowlada iyo maamul goboleedyada